Vidio Earrings Stud Zirconia Silver 925 Sterling Silver - Fandefasana maimaim-poana ary tsy misy haba | WoopShop®
Kavina volamena 925 Sterling Silver Zirconia Stud
Kavina antitra 925 Sterling Silver Zirconia Stud - 908 tafaverina ary halefa raha vantany vao tafaverina ny tahiry.
Vato an-kilany: fitaovana hafa amin'ny artifisialy
Karazana kavina: Kavina kavina
Miorina amin'ny fanavaozana 39
Kavina tena tsara, kely fa azoko antoka ny fahazoan-dàlana
Ny kavina dia chic fotsiny, ny baiko dia telo samy hafa amin'ny mpivarotra ary faly daholo. Faly indrindra amin'ny kavina misy vato, ny vato rehetra dia miorina amina chic mamiratra. kavina fotsiny dia afo. Mendrika tombo-kase 925. Tonga daholo ny zava-drehetra, tsy nisy kilema, nopetahany tao anaty pupyrku.
Tsara ny kavina, kambana tsy mahazo aina fotsiny
Tany amin'ny tanànan'i Orel dia naharitra 10 andro ny fandefasana. Ny kavina dia mahafatifaty, mamirapiratra tsara tarehy. Amin'ireo minus-ny buckle ... tena tery izy io, nafoiko ny vady, tsy afaka aho) ary arak'izany, matahotra ny hiditra ao an-tsofiko aho ... tsy hivoaka intsony) dia azovolavolaina mazava ho azy Amin'ny ankapobeny, tsara tarehy, manoro hevitra aho!